Jabo mitafy lamaody - mijoro, azo alaina, vita amin'ny dantelina, vintage, ahoana ny fomba, ahoana no fomba akanjo, akanjo, akanjo?
Jirom-bolo - 32 sarin'ny sary tsara tarehy sy kanto ho an'ny tsirony rehetra
Ny jabot dia avy amin'ny lasa, ary antsipiriany ny akanjon'ny lehilahy iray. Rehefa nandeha ny fotoana, nanomboka nanararaotra ny akanjony koa ny firaisana ara-nofo. Naseho azy tamin'ny endriky ny lamosin'ny loko samihafa ary hita any amin'ny faritra vozona ao amin'ny faritra avaratra.
Inona no endrik'ilay sahona sahona?
Tamin'ny voalohany, ny volondron'ilay volombava, izay misy lakaoly maromaro maromaro, dia mareva-doko fotsiny, fa ao anatin'ireo vanim-potoana vao haingana dia ahitana ny antsipirihan'ny vehivavy maro ao amin'ny gardrobe. Azo zaraina amin'ny karazany toy izany izy io:
kokilje - kavina iray totozy, manapaka tsikelikely na faribolana shuttlecock;
"Kapaoty" - manjaitra ny tendany ary manompo toy ny kavina;
tsipìka, tsara tarehy eo anoloana.
Hira japoney - tantara
Sambany, ny volombava dia nampiseho ny endriky ny akanjon'ny lehilahy iray tamin'ny taonjato faha-17, nanamboatra azy ireo tamin'ny akanjo fotsy tsara tarehy ny Frantsay. Taty aoriana dia hita fa nitafy akanjo tao Espana izy, ary tamin'ny tapaky ny taonjato faha-19 dia nanomboka nampiasaina tao am-pofon'ilay vehivavy. Ny Beauties dia nampiasa toy izany tamin'ny baolina baolina. Ny jabot dia midika hoe struma avy amin'ny vorona, ary aseho amin'ny endriky ny akanjo vita amin'ny dantelina na lamba voatifitra tsara tarehy amin'ny akanjo, lobaka na fehiloha . Ny famolavolana toy izany dia afaka manome ny androany, miaraka amin'ny aristokrasia sy ny hakantony.
Hira fisaonana amam-bika
Miaraka amin'ny fisafidianana kofehy marevaka tsara, ny jabot dia afaka mametraka ny fepetra rehetra. Ny shuttlecocks dia afaka manome ny sarin'ny fihetseham-po sy ny hafanana. Ny karazan'io singa mamaritra io dia mifanentana tsara amin'ny akanjo, ary mety ho toetra iray amin'ny akanjo isan'andro sy fety.
araka ny habeny, mety ho fohy na farafaharatsiny, maka ny faritra tratra;
dia mety ho azo alaina, izay mamela amin'ny fotoana mety hanova ny foto-kevitra andavanandro ao amin'ny trano fandroana ao amin'ny trano fandroana fety;
Ny angom-bozaka iray dia aseho amin'ny antsipiriany amin'ny endriny, ny vavony matevina ary ny tsipìka lehibe;
Ny famenoana ny tsipika ara-barotra dia safidy tonga lafatra "rack";
Jereo tsara ny karazana garderie rehetra: akanjo, akanjo, akanjo;
Ho fitaovana amin'ny famokarana, ny dantelina, ny guipure, ny silk, ny satiny ary ny karazana lamba hafa dia ampiasaina.
Ny akanjo am-piasana dia matetika ampiasaina ny jabot fotsy fotsy, miaraka amin'ny endriky ny "rack". Raha azo atao dia azo ampiharina any amin'ny efitra hariva izy io. Anisan'ireo toetra mampiavaka ny modely toy izany dia afaka asaina ireto manaraka ireto:
Afaka manongotra ny tendany ary manao azy ho kanto kokoa;
Ny fihodinan'ny menarana dia mety ho vitsy kely na ampitambatambazan'ny fiaramanidina misy kofehy ao amin'ny vozon'akanjo;
Izany fomba izany dia mety amin'ny zazavavy kely, satria manome volavolam-boky avy any ambony;
mety misy bokotra iray izay manome famerana fanampiny;
Ny famolavolan'ny volombava miaraka amin'ny dantelina dia matetika ampiasaina na vita amin'ny lamba mitovy aminy toy ny akanjo;
Io fandikan-teny io dia tena tsara tarehy, vita amin'ny tapa-doko, izay fenoina amin'ny dantelina manodidina ny sisiny.
Ravin-kiraro amin'ny dantelina
Ny vehivavy mihaja manokana sy ny toetra amam-panahy dia afaka omena amin'ny tendron'ny kiraro ny voaly. Mety misy fahasamihafany amin'ireto toetra manaraka ireto:
rehefa ampiasaina ny lamba firakotra monophonic na loko maromaro;
Tena marevaka ny felam-boninkazo, izay voangona eo ambany;
Azo ampiasaina ao amin'ny tapany afovoan'ny tsipika na lamaody tsara ny versione lacy.
Amin'ny vanim-potoana vao haingana dia lasa lamaody marefo ny angom-bolo miova ho azy, nanjary karazana haingo izy ireo. Ny tombony ho azy ireo dia ny fahafahana manala azy amin'ny fotoana rehetra ary manova ny sary. Misy ny fiovan'ny karazan-javatra toy izany:
Amin'ny famokarana satin tapis, laces, perla, bosoa na tsipika no ampiasaina;
dia mety hitovy ny kofehy, paingotra ary ny rivotra;
Amin'ny maha-mpanamboatra fihenam-bidy, tsindrona iray, azo haverina avy any ambadiky ny fanampiana amin'ny kasety.
Mpampiasa kintana maro no mampiasa jabot tsara tarehy ao amin'ny fanangonany. Mandritra izany fotoana izany, tian-dry zareo vintage ny endriny manokana amin'ny fotoana namoronana ity fitaovana ity. Azo atao ny manamarika ireo karazan-tsarimihetsika malaza toy izany:
Eo amin'ny lozam-pifamoivoizana dia misy modely izay manana fako lehibe eo ambanin'ny mina;
Ny iray amin'ireo endri-javatra dia miseho amin'ny fomba amam-pihetseham-po, izay misy tsangambato vita amin'ny kofehy ary kofehy mimanda;
Ny firavaka misy volom-borona dia mety ho singa miavaka amin'ny fivalozana ny akanjo na akanjo, na ny tapany azo alaina;
Ny vokatra tsy mahazatra avy amin'ny lamba malefaka dia lasa lamaody: tweed, kibo, volon'ondry;
Ny singa toy izany dia mety hitovitovy endrika na tsy manana endrika tsy ara-dalàna;
Ireo mpanamboatra amin'ny zava-boahary an-tsokosoko dia manolotra kavina, kofehy, volom-borona, vato na fehezina vita amin'ny hoditra;
Azonao atao ny manamboatra fitaovana iray misaraka amin'ny clamp.
Jirom-bolo - ahoana no hitafy?
Zava-tsarobidy mampitolagaga amin'ny jabot amin'ny akanjon'akanjo vehivavy dia azo ampifandraisina amin'ny akanjo gasy hafa miaraka amin'ny fanampian'ny teknolojika toy izany:
Koa satria ny tsipiriany toy izany dia tena mamirapiratra sy tsy hay hadinoina amin'ny tenany, ny iray dia tokony hanaisotra ny fisian'ny zavatra misy volom-bary, zavatra be dia be, mba tsy hameno ny sary;
Mety ho singa azo alaina izy io, izay mifototra amin'ny tranga tsirairay;
Rehefa mifidy akanjo, dia asaina mijanona amin'ny loko marefo, mba tsy hahatonga ny sary ho toa sahiran-tsaina loatra;
Ny akora lava kokoa amin'ny endriky ny rojom-borona, ny tain-tsakafo dia tsy ankasitrahana miaraka amin'ny karazana kavina;
Rehefa mampiasa ampahany vintage, dia mendrika ny maka ny brocho vita amin'ny fomba mitovy.
Zavatra tena mahavariana izay mety ho an'ny vehivavy amin'ny vanim-potoana rehetra, dia ny akanjom-behivavy amin'ny jabot. Izy io dia mifanaraka tanteraka amin'ny fitiavan-tanindrazana sy eo amin'ny sarin'ny orinasa. Ao anatin'ireo toetra mampiavaka ny vokatra toy izany dia azo soratana ireto manaraka ireto:
Ny akanjon-damosina matetika dia vita amin'ny satroka manjelatra, satin-jiro na chic;
Toy ny fifadian-kanina dia misy bokotra, indraindray ny tselatra, izay mety ho eo anoloana, ao ambadik'izany na mandalo eo amin'ny seza misy ny soroka;
Ny akanjo toy izany dia hijery tsara amin'ny akanjo, akanjo sy pataloha mafy;
Ny safidy tonga lafatra dia ho kitapo, izay ampiasaina ny akanjom-bolo sy kiraro amin'ny kalesin'ady ;
raha misy akanjo mipetrapetraka eo amin'ny akanjo, fa ny ambany kosa dia pensilihazo-pensilihazo na mipoitra, endrika malefaka fohy;
Ny blouse dia azo antoka fa haparitaka amin'ny orinasa na orinasa iray;
Ho an'ny jeans toy ny blouse dia tsara kokoa ny misafidy amin'ny laconic version, izay misy tsiro tsotra opaque ampiasaina. Ny vahaolana tena tsara dia modely vita amin'ny lamba ao anaty tranom-borona, miaraka amin'ny fanampiana azonao atao hamoronana sary tsy misy dikany amin'ny fomba kazhual;
Azo atao ny mamorona sary miaraka amin'ny fanampian'ny blouse misy kapoaka lehibe manatona ny tratra na eny amin'ny tady lava.
Mitafy akanjo jabota
Endrika mahafinaritra sy mahazatra mitafy akanjo lava. Azonao atao ny manamarika ny lafiny mampiavaka azy ireo:
Tokony hofidiana izy ireo, arakaraka ny endrik'ilay sary sy fitomboana. Ny akanjo toy izany dia tsara ho an'ny zazavavy mavomavo, hanampy azy ireo hanome ny volon'ilay tratra ary hampiavaka azy bebe kokoa. Ho an'ireo zazavavy maditra dia tsy mety ny dikantenin'ilay akanjo.
Ny jabot-kiraro miloko marevaka dia afaka mamirapiratra miaraka amin'ny ravina na zavatra hafa.
Ny akanjo dia afaka manana lava lava amin'ny lohalika na eo amin'ny tany, ny safidy dia nomena modolo monochromatic. Misy ihany koa ny safidy ao amin'ny tranom-borona , miaraka amin'ny fotsy hoditra na hafa monophonic.
Ny akanjo toy izany dia mety ho matavy, manana rantsantanana telo-polo na tanana lava lava.
Miakanjo amin'ny jabota
Ny tena mahavariana dia manjary toy ny fitafiana vehivavy miaraka amin'ny satroka boribory. Manan-danja toy izany izy io:
Ao amin'ny tendany ambony eo amin'ny tendany dia misy kofehy boribory na "rack", ary eo amin'ny tratra dia misy tondra-drano mihodina. Izy ireo dia vita avy amin'ny lamba mitovy amin'ny kapa;
Raha ny rafitra loko, dia azo sakanana izy io, aseho amin'ny mainty mainty, mavomavo, beige, ary mamiratra tsara;
Ny kofehy dia mifatotra amin'ny palitao amin'ny alàlan'ny bokotra, mifametaka na bokotra lehibe;
Afaka manolotra sodina miloko marevaka ny taova;
Ny kofehy dia afaka mifanena amin'ny lokony amin'ny akanjony na mampifanohitra azy, izay manome ny sary misy fiantraikany kokoa.
Volo eo ambonin'ny volo
Lamina lava ho an'ny akanjo volom-borona
Ny menaka manitra miaraka amin'ny fialam-boly
Yves Saint Laurent fanadiovana vehivavy
Kianjan'ny fiambenan'ny vehivavy
Tempalgin - famantarana ny fampiasana
Carob dia tsara sy ratsy
Afo hoditra - inona no tokony hataoko?
Ahoana no hifehezana ny volo eo amin'ny pensilihazo?
Elektrika ho an'ny voankazo sy legioma
Fampandrosoana kely an'i Emma Roberts - tsy fanakanana ny kintan'ny tanora
Fangatahana fitafiana mafy ho an'ny vehivavy
Oseophagitis - fitsaboana
Ahoana no hikarakarana kisoa?
Orinasa any Paris